Plurro dia mitondra ny Mob Mob ho an'ny orinasan-tsinjara eo an-toerana | Martech Zone
Nisy lavaka matotra hita tao amin'ny indostrian'ny fihenam-bidy vondrona mbola tsy resy. Ny fitarainana avy amin'ny orinasa mampiasa Groupon sy LivingSocial dia nanondro olana maromaro:
Ny fihenam-bidy takiana dia maranitra tokoa ka manimba ny orinasa.
Ny fandoavam-bola amin'ny fihenam-bidy dia tsy tonga eo noho eo, ka miteraka olana ara-bola lehibe izay nandevina orinasa sasany.
Ireo mpanjifa mahasarika azy ireo dia mivoaka irery ihany ary tsy miverina intsony.
Miezaka mafy mivarotra orinasa matetika ireo orinasa.
Plurro namadika ny maodely fihenam-bidy vondrona tamin'ny lohany. Voalohany, ny mpanjifa no mitondra ny mob mob. Vantany vao misoratra anarana ny namanao handehanana any amin'ny toeram-pivarotana na fivarotana antsinjarany, dia mifandray amin'ny raharaham-barotra amin'ny karazana fihenam-bidy azony omena i Plurro. Ny Plurro Cash Mob dia miseho ary tsy maintsy mampiseho ny tapakilan'izy ireo finday ary mampiditra ny vola fandraisam-bahiny hahazoana ny fihenam-bidy. Voamarin'ny tompona orinasa izany.
Ny tapakila rehetra dia natombok'i Plurro ary ny orinasa dia mandoa vola 5% amin'i Plurro ho an'ny orinasa. Vahaolana lehibe io ary maharesy ny tsirairay amin'ireo olana etsy ambony. Voalohany, afaka mandray anjara ny orinasa raha toa ka tadiavin'izy ireo ny fihenam-bidy. Manaraka izany, mahazo vola mialoha izy ireo ary mandoa an'i Plurro. Ny tena zava-dehibe, satria ny namana no mampiasa ny rafitra… io dia mitovy amin'ny toerana sy fialamboly betsaka toy ny fihenambidy Ary farany, ny antony tokana niantso an'i Plurro dia satria efa misy andian-mpanambola miandry!
Ity misy topy topimaso momba an'i Plurro:
Plurro dia ampifandraisina amin'ny Facebook ary mamela anao fomba maro isan-karazany handrafetana sy hanasana ny namanao ho any amin'ny volanao manaraka.
Plurro dia natomboka tany avaratr'i Virginia ary manomboka any Indianapolis izao. Hotsapainay izany - fialan-tsiny lehibe ny hamerenana amin'ny laoniny ny sehatra sosialy eto an-toerana! DOWNLOAD Plurro amin'ny iPhone - Ho avy ny Android.
Tags: mob mobfihenam-bidy amin'ny vondronagrouponlivingsocialplurro
Fandrefesana ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa